Isku Si Wax Ma U Qiimaysan Karnaa? | Explorations in History and Society
Wednesday 3 February 201- Bar AMA Baro- Dawladnimadu waa Hannaan Maamul iyo hab abaabul Bulsheed oo horumarsan, mana jiri karto dunidan cusub Ummad ka maarantaa. Ha ahaatee dawladnimada cusubi dadka Soomaalida wax ay u sidday Hoog iyo Xanuun.
Bal kelitaliyahaa macangagnimadiisa u fiirso oo, xitaa kolkii ay in badan oo dalka ahi gacantiisa ka baxday, bulshaduna noqotay in uu isagu halaagay iyo in silcaysa, wuu garan waayay in uu qaato waanwaan wax lagu dabaqabto. Weligii maskaxdiisa ku ma soo dhicin in uu talada dalka ee la la lee yahay wadahadal ka galo si wax loo badbaadiyo. Ninkaa xilkasnimo darradiisa intaas baa tusaale ugu filan. Hadhowna isaga iyo Askartii kale ee Oktoobar markii ay wixii oo ayaandarro ah dadkii badeen, dalkiina cadaab ka dhigeen, debedaha ayay u wada yaaceen oo dhulal kale degeen. Waa heerka ugu hooseeya ee ay gaadhi karto Anshaxa iyo garashada Qof Mas’uul sheegtay.
Sidee cafis iyo wada noolaansho u suurtoobi karaan? Nimankii dawladnimadii ka dhigay mishiin cadaab ah oo lagu wada gubtay, qof leh garasho hagaagsan iyo Anshax suubban ma u bannaan tahay in uu weyneeyo? Jawaabtu haddii ay “Haa” noqoto waxaa caddaanaysa in aan arxan jirin iyo in aan isku si wax loo qiimaysan karin.
SHALAY IYO MAANTA’ Xusuusta Soomaaliya iyo caalamka TAARIIKH NINKIIS BAA LEH